Okuhambayo nezingane kungaba okwakwenzeka noma isikhathi esingcono zokuphila kwakho. Ngenxa natures nabancane bethu 'olinde isifiso sethu sokujabulisa kubo, khona ngokuvamile kungekho umhlabathi ophakathi. Nokho, kunezindlela kuwe ukwenza ukuhamba nezingane kulula ngokwakho. Indlela engcono kakhulu yokwenza kanjalo iwukuba ukuqinisekisa intsha njalo ukwenza okuthile noma ukubona. Ukuze sikusize izigcine zenza okuthile, senze uhlu lwefayela le- 5 ezikhangayo kangcono izingane e-Europe. Ungakwazi kalula ukufinyelela lezi zindawo ngesitimela. Ake ubuke:
Amsterdam ngokuvamile is hhayi Kunconywa njengendlela friendly umndeni- uya khona, kodwa lokho akusho ngeke kube ngaleyo ndlela. izingane, mhlawumbe indawo ejabulisa kakhulu kuba Natura Artis Magistra noma abaculi. Kuyinto i-zoo enkulu igcwaliswe nge-aquarium, zokudlala, Zoological Museum, kanye izinkanyezi. Zibonisa ezingaphezu kuka 900 kwezilwane!
Kungenjalo, ungakwazi amabombo Efteling e Kaatsheuvel. Kufana ipaki enkulu yetimu ezweni, nge fantasy isihloko kanye okugxile izinganekwane kanye izinganekwane. Kukhona ugibele eziningi nokuzijabulisa izingane ngubani ziyazithanda inganekwane.
Uma kuziwa kwezokuzijabulisa izingane, Belgium inikeza ingqikithi yayo epakini, Plopsaland. Kuyinto ezimibalabala, egcwele roller coasters nasezindaweni zokudlala, futhi ezihlukahlukene themes kukho konke ingane ukujabulela. Iphinde ibe nepulazi ne izilwane izingane ezingazivakashela, kanye yaseshashalazini kanye isikebhe ugibele.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu futhi umbhalo kanye nje ukusinika credit enesixhumanisi lokhu post blog, noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-attractions-kids-europe%2F%3Flang%3Dzu- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#ezikhangayo #traveleurope europetrains europetravel i-eurotrip izitimela Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi uhambo ngesitimela imvuenline phungingland travelfrance travelitaly travelnetherlands traveltips